तिहारमा मखमलीको माला – केबी मसाल
October 16, 2017 KB Mashal0Comment
हामी नेपालीहरुको मुख्य पर्व यो बर्ष दसै सकिना साथ तिहार सुरु भएको छ । तिहारमा दिदी बहीनीले आफ्ना दाजु भाइलाई मखमलीको पूmल र सयपत्रि पूmलको माला, सप्तरंगी दुवोको टिका लगाउने प्रचलन रहेको छ । मखमली पूmल कहिल्यै ओइलाउँदैन, सयपत्रीको रंगकहिल्यै उडेर जाँदैन भने दूबो सधै हरियै रहन्छ । त्यसैले तिहार मा यी पूmलको माला महत्वपूर्ण मानिन्छ । तिहार पर्वमा गणेशको पूँजा गर्ने, यमराजको आव्हान गर्ने, बिमिरो, ओखर, तेल, मखमलीको माला, कटुस आदिको प्रयोगले दिदीबहिनी र दाजुभाइको सुख–समृद्धि, आरोग्य एवं दीर्घायु हुने धार्मिक तथा पौराणिक मान्यता रहेको छ ।
केहिबर्ष यता आएर तिहारमा मखमली र सयपत्रीको माला देखिनै छाडेका छन् । यसको ठाउँमा प्लाष्टिक तथा कृत्रिम मालाको प्रयोग बढदै गइरहेको छ । भारतबाट भित्रिएका प्लाष्टिकका कृत्रिम मालाले यो बर्ष धेरै स्थानमा तिहार सकिएको छ । अर्कोतर्फ गाउँघरमा फुल्ने मखमली, सयपत्री र गुरधौली फूल देखिन छोडेको छ । अर्को तर्फ प्राकृतिक फूलको महत्वलाई बिर्सदै गएकाले गाउँघरमा ढकमक्क फूल फुलेपनि देखाउनकै लागि प्लाष्टिकको माला प्रयोग गर्ने संस्कार बस्न थालेको छ । प्लाष्टिकको माला प्रयोग बढेपछि सयपत्री र मखमली फूल लोपोन्मुख अवस्थामा पुग्न थोको छ । जिल्लामा कृषि विकास कार्यालय र कृषि सम्बन्धि काम गर्ने संस्थाहरुले यसको संरक्षण नगर्दा पनि सयपत्री र मखमली फूल लोप हुने अवस्थामा पुग्न थालेको छ । सयपत्रि फूलको सट्टा बजारबाट किनेर ल्याइएको प्लास्टिकको मालाले गला ढाकिए पनि सयपत्रिको माला जस्तो सौन्दर्यता भने देखिदैन । सयपत्री र मखमली विना तिहारको महत्व हुदैन भन्दा पनि हुन्छ ।
नेपालमा अहिले सम्म ४१ जिल्लामा व्यवसायिक फूलको खेति गर्न थालेका छन । काठमाडौं, ललतिपुर, भक्तपुर, पोखरा, नारायणघाट, हेटौंडा, काभ्रे र विराटनगरलगायत ४१ जिल्लामा लगभग ६७५ फूलको ब्यवसाय गर्ने फर्म र नर्सरी संन्चालनमा छन । तिहारमा व्यवसायिक रुपमा कारोबार हुने फूलको ९० प्रतिशत शहर बजार नजिक भएका ८ जिल्लामा उत्पादन हुदै आएको छ । तिहारमा प्रयोग हुने ८० प्रतिशत सयपत्रीको माला स्वदेशी उत्पादनले धान्छ भने बाँकी २० प्रतिशत भारतबाट आयात हुने गरेको छ । सयपत्री पूmलफुल्ने समय पहिलाको भन्दा छिटो भएका कारण केही वर्ष अघिसम्म ढकमक्क फुल्ने सयपत्रि र मखमली पूmल हिजोआज लोपन्मुख वन्दै गएको छ ।
हाम्रो देश भौगोलिक विविधता र जलवायु समेत उपयुक्त भएकोले फूल व्यवसायका लागि अत्यन्त उपयोगी छ । वैज्ञानिक ढंगले प्रमुख उद्योगका रुपमा फूल व्यवसाय स्थापित हुन सक्छ । हाम्रो देशमा ५ हजार ८ सय ३३ प्रजातिका फूल फुल्ने बिरुवा छन् । तीमध्ये २ सय ४६ प्रजाति फूल अन्य मुलुकमा पाइदैनन् । कृषिप्रधान देश भएर पनि अर्थतन्त्रमा मुख्य भूमिका खेल्न सक्ने फूलजन्य पेशा उपेक्षामा परेको छ । अझै पनि फूलको व्यवसाय सहरमा मात्रै हुन्छ भन्ने हामीमा भ्रम छ । युवाहरु रोजगारीकोलागी खाडी मुलुक पुगेका छन । गाउँका खेतबारी बाझोमा परिणत हुन थालेका छन । गाउँघरमा बसेर कृषिजन्य ब्यवसाय गर्ने बानीको बिकास भएको छैन ।
तिहारको समयमा प्रयोगमा आउने पूmलहरु पनि अब हामीले प्लाष्टिकको किन्न थाल्यौ भने हाम्रो अवस्था के होला ? यो सबैले सोच्न पर्ने भएको छ । पूmल बजारमा बिक्री भए पनि त्यसको उत्पादन गाउँमै हुन्छ भनेर हामी सबैले कहिले बुझने ? पूmलको खेती कम भएपनि माग भने क्रमस बढन थालेको छ । शहर बजारमा आजभोली फूलका बिरुवा घरआगन, बगैंचा, पार्क, स्कुल, निजी कार्यालयमा सजाउने क्रम बढदो छ, यो राम्रो पक्ष हो । मौसमी फूल र घरभित्र सजावटका बिरुवाको माग पनि बढदो छ । हरेक गोष्ठि, सेमिनार, उत्सव, महोत्सव, विवाह, व्रतबन्ध तथा अन्य शुभकार्य हुन वा शोक तथा श्रद्धान्जली जस्ता दुःखका क्षणमा पनि पूmलको आवश्यकता बढदै गएको छ । तर उत्पादन भने माग अनुसार नभएर हामी प्लाष्टिकको पूmल किन्न थालेका छौ ।
सबैखाले सयपत्रीको उदगम थलो संयुक्त राज्य अमेरिकाको दक्षिणी भूभाग, मेक्सिको तथा दक्षिण अमेरिकी महादेश हो । त्यतैबाट सयपत्री पूmलले विश्वका विभिन्न देशमा प्रवेश पायो । नेपालमा कसरी र कहिले यी सयपत्री फूल आयो भन्ने भरपर्दो आधार भेटिएको छैन । अहिले अनेकौं थरीका सयपत्री पूmल पाइने गरेको छ । हाम्रो संस्कार र संस्कृतिभित्र परापूर्वकालदेखि सयपत्री फूल संस्कृति फूल भएको छ । तिहारलाई सिंगार्ने सयपत्रीका फूलहरु दुई समूहमा छुट्याउन सकिन्छ । सानो कदको, सानै फूल फुल्ने र सजिलै माला उन्न मिल्ने तथा फूल पनि नझर्ने नओइलाउने र रंग पनि नखुइलिने सयपत्रीहरु फ्रेन्च मेरिगोल्ड समूहमा पर्छन् । यस समूहका सयपत्री फूलका बाहिरी पुष्पिका फैलिएर फक्रन्छन् । तसर्थ यिनको वैज्ञानिक नाम पनि टागेटिस पाटुला रहेको छ । पाटुलसको ल्याटिन अर्थ फैलनु हुन्छ । सयपत्री फूलहरु गाढा चम्किलो रंगमा विशेष गरेर सुन्तला पहेंलोमा गाढा कलेजी वा रातो रंगमा सजिएका हुन्छन् । ठूलो खाले सयपत्री फूललाई सामान्यत अफ्रिकन मेरिगोल्ड भनिन्छ । यस किसिमका सयपत्री फूलहरु डल्लो आकारमा फक्रन्छन् । सुन्तला वा फिका पहेंलो रंगमा यी सयपत्री फुल्दछन् ।
गोदावरी फूलको सौन्दर्य विश्वमा सम्मानित छ । जुन फूललाई हामी गोदावरी भन्छौं, त्यसलाई इस्लामिक संसारमा गुलदाउदी भनिन्छ । धर्मगुरु दाउदको नाममा यो समर्पित छ । यूरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडालगायत अन्यत्र यसको प्रचलित नाम हो क्रिसान्थेमम । ग्रीक भाषामा क्रायोस भनेको सुन वा सुनौलो र एन्थेमोन को अर्थ फूल हो । त्यस अर्थमा सुवर्ण फूल हो गोदावरी । तर गोदावरी अनेकौं रंग र आकारमा फक्रिन्छ । इसापूर्व १५औं शताब्दीमा गोदावरीलाई बगैंचामा फुलाएर यसको इतिहास रच्ने श्रेय चीनलाई जान्छ । त्यसपछि आठौं शताब्दीमा यसले जापानलाई दिवाना बनायोर राजकीय सम्मान प्राप्त ग¥यो, राष्ट्रिय फूल बन्यो । जापानी सम्राटको राजगद्दीलाई ’क्रिसान्थेमम थ्रोन’ भन्ने चलन छ । यता चीनमा गोदावरी फूलकै नाममा शहरहरु नामकरण भएका छन जस्तो– जु–जियाङ । अमेरिकाको शिकागो शहरको आधिकारिक पूmल पनि गोदावरी हो । गोदावरी सुन्दर एवं आकर्षक फूल हो । विशेष गरी असोज तथा कार्तिक महिनामा यो फूल पूर्णरुपमा फुल्छ । गोदावरी जापानको राष्ट्रिय फूल हो ।
गोदावरी सबैको घरमा पूmलाउन सकिन्छ । गोदावरी फूल निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । यो फूलको सजावट करिब एक हप्तासम्म ताजा रहन्छ । यसका भिन्न–भिन्न पातलाई सुन्दर फूलदानीमा सजाउँदा घरको शोभा बढछ । गोदावरीलाई चाइनिजहरुले औषधिका रुपमा प्रयोग गर्न खेती नै गरेको पाइन्छ । जापान पढन गएका विद्यार्थीले यो फूललाई उपत्यकाको गोदावरी गाउँमा रोपेपछि यो पूmलको नेपाली नाम गोदावरी रहन गयो । गोदावरी पूmल चीनमा ६ हजार ५ सय, जापानमा १९ हजार तथा नेपालमा २ सय प्रजातिमा पाइन्छन् । नेपालका ठूला चाड–पर्व दसंै तथा तिहारको हाराहारीमा फुल्ने यो फूलको महत्व बढदै गएको छ ।
मखमली फूल नेपालीहरुको लागि सांस्कृतिक महत्व बोकेको प्रसिद्ध फूल हो । मखमली फूल कहिले नओइलिने भएकोले यसलाई दिर्घायु र स्वस्थ जीवन को प्रतीकको रुप मा लिइन्छ्र । दक्षिण अमेरिकी महादेशको ब्राजिल, पानामा र ग्वाटेमाला क्षेत्रबाट भित्रिएको फूल मखमली हो । दिदीबहिनी र दाजुभाइको प्रेमलाई पवित्र गाँठोमा बाँध्न सफल मखमलीको माला नेपाली तिहारको अभिन्न अंग बनिसकेको छ । सुपारी जस्तो गोलाकार मखमली फूल पनि सयपत्री झैं सयौं फूलको पुष्पपुञ्ज हो । नामले मखमली भनिए तापनि यो फूल नरम, कोमल र कलिलो नभई खस्रो हुन्छ । वैजनी र प्याजी रंगमा मखमली विशेष लोकप्रिय छ । नझर्ने, नओइलाउने र वर्षौं पनि टिक्ने हुनाले यसको अजम्बरी प्रकृतिलाई आत्मसात गरेर दिदीबहिनीहरुले आफ्ना दाजुभाइलाई मखमली फूलको माला लगाइदिएर दीर्घायुको कामना गर्छन् । संकृत मा रक्त मल्लिका भनिने यो फुल देख्नमा पनि सुन्दर मानिन्छ ।
हाम्रो देशको भौगोलिक अवस्थाको कुरा गर्दा यहाँका हिमाल पहाड तराई जुनसुकै क्षेत्र पनि प्राकृतिक सम्पन्नताले भरिपूर्ण रहेका छन् । विकट हिमाली तथा पहाडी इलाकामा प्राकृतिक रुपले फुल्ने सुनाखरी लालीगुराँस वा उपत्यका र तराईका फाँटमा फूल्ने मखमली सयपत्री हुन् सबैको आ–आफ्नै विशिष्ठ महत्व रहि आएको छ । प्राकृतिक रुपले सम्पन्न हावापानीको कारणले नै यहाँको जैविक विविधताको संरक्षण हुन पुगेको छ ।
पूmलको व्यवसाय शुरु गरि सकेका तथा शुरु गर्न चाहने कृषक तथा व्यवसायिहरुलाई नर्सरी व्यवस्थापन मौसमी तथा बेमौसमी फूल उत्पादन तालिम लगायतका कार्यक्रमहरु सन्चालन गर्नु आवश्यकता भईसकेको छ । त्यसै गरी फूल व्यवसाय गर्न चाहनेहरुका लागि बजार माग तथा मौसमी मागलाई दृष्टिगत गरी पूmल सजावटका तालिम सन्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । भने अर्कोतिर विदेशबाट आयात भैरहेका फूलका विरुवाहरुलाई स्वदेश मै उत्पादन गर्नका लागि विदेशी प्रविधि ज्ञान र सीपलाई बेराजगार युवायुवतीहरुले व्यवहारमा उतार्न पर्दछ । पूmल आबस्यक पर्दा खोज्ने मात्र होइन,फुर्सदको समयमा सबैले आफ्नो घर आगन र करेसाबारीमा लगाउने बानीको बिकास गर्दै जाने हो भने प्लाष्टिकको पूmल तिहारको समयमा किन्न पर्दैन । यो कुरा सबैले बुझन जरुरी छ ।
मिती ः–२०७४ असोज २८ गते दाङ
← मनाङ जिल्ला पर्यटनको गन्तब्य
खप्तड पर्यटनको गन्तब्य →